Izindaba - Ngabe i-Operating Light ayikwazi ukufakwa egumbini le-OR elinobude obuphansi?
Eminyakeni eminingi yokuhlangenwe nakho kokuthengisa nokukhiqiza, sithole ukuthi abanye abathengi badidekile kakhulu lapho bethenga ukukhanya okusebenza.
Okwe ophahleni ukukhanya okusebenzayo, ukuphakama kwayo okuhle kokufakwa kungamamitha angu-2.9. Kepha eJapan, eThailand, e-Ecuador, noma kwamanye amazwe ase-Afrika, izinkundla zabo zokusebenza ngokuvamile zingaphansi kwamamitha angu-2.9 ukuphakama. Ngabe abakwazi ukufaka uphahlaukukhanya okusebenza?
Lapha sidinga ukwazisa umbuzo mayelana nokuphakama kokufakwa, futhi kufanele siqinisekise nekhasimende ngaphambi kokufaka i-oda. Okubizwa ngokuthi ukuphakama kokufakwa, okungukuthi, ukuphakama kwaphansi, kubhekisela ekuphakameni kusuka ophahleni lokuhlobisa kuya phansi, hhayi ukuphakama kusuka ophahleni kuya phansi. Vele, kusenamanye amakamelo okuhlinza angenawo lo siling wokuhlobisa. Kulolu hlobo lwegumbi lokusebenza, ukuphakama kokufakwa kwalo kuyibanga ukusuka ophahleni kuya phansi.
Buyela esihlokweni futhi, hlobo luni lwezixazululo esinalo njengomhlinzeki wokukhanya osebenzayo osebenza ngeminyaka engama-20. Sicela uhlole inqubo yokuthengisa phakathi kwami ​​nekhasimende lami elisha i-Ecuador.
Ikhasimende lithenga ilambu elisebenza ngamakhanda amabili le-LED lomtholampilo wezilwane. Ngaphambi kokufaka i-oda, ngidinga ukuthi anikeze ukuphakama kokufaka. Isithombe esingezansi inqubo yokulinganisa ukuphakama ayithumele emuva.
Ekugcineni kuqinisekisiwe ukuthi ukuphakama phansi kungamamitha angu-2.6 kuphela, okungahlangabezani nemfuneko yokuphakama okujwayelekile kwamamitha angu-2.9.
Ngemuva kokubheka ukuphakama okujwayelekile kodokotela nokuphakama kwetafula lokusebenza, sanquma ukwamukela uhlelo lokufaka olwenziwe ngokwezifiso.
Sakha kabusha isibambi futhi senza imidwebo yamakhasimende ukuqinisekisa. Iklayenti liyavumelana nohlelo lwethu lokuklama.
Ngemuva kokuthola izimpahla nokuzisebenzisa isikhathi esithile, ikhasimende liyaneliseka kakhulu.
Kamuva, ngenkathi evakashele igumbi lakhe lokuhlinzwa elisha, umngani wakhe ongudokotela uhlela kabusha i-LED enamakhanda amabili ukukhanya okusebenza.
Lapha, ngibonga ngobuqotho udokotela wezilwane ongisizile ukungithumela. Kufanele kube yimikhiqizo yethu enokwethenjelwa futhi insizakalo ecabangelayo ngemuva kokuthengisa ithuthe odokotela.
Ngaleli cala lezokuxhumana, siyazi ukuthi igumbi lokuhlinza elinobude obuphansi obungu-2.6m lisenezimo zokufaka uphahla ukukhanya okusebenza.
Kepha kukhona amanye amacala, njengokuphakama kwegumbi lokusebenzela cishe kungu-2.4m kuphela, kulokhu, sincoma ukuthi amakhasimende asebenzise uhlobo lodonga ukukhanya okusebenza noma iselula ukukhanya okusebenza.
Ngezansi futhi sinemidwebo yokufaka ukuze isetshenziswe.
Kusukela esikhathini sokukhanya kwe-halogen OT kuya ekukhanyeni kwe-LED OT, inkampani yethu ineminyaka ecishe ibe ngu-20 yesipiliyoni ekuklanyeni, ekukhiqizeni nasekufakeni amalambu okuhlinza ekhaya nakwamanye amazwe.
Ngakho-ke, njengekhasimende, uma unanoma yimiphi imibuzo mayelana ne- ukukhanya okusebenza, ungabonisana nathi ekhasini lokubuza, siyajabula ukulixazulula.
Noma kungekho sivumelwano, lolu lwazi olubalulekile lokuxhumana lungasisiza senze izinhlelo ezingcono kwinqubo yokuthengisa ezayo.